Shirkii Farmaajo ku baaqay oo fashilmay | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Farmaajo ku baaqay oo fashilmay
Waxay ahayd Maanta oo 15-ka bisha Febuary ah inuu Shirka ka furmo magaaladda Garoowe, ee Caasimada Maamulka Puntland.
GAROOWE, Soomaaliya - Shirkii la filayay inuu Maanta uga furmo magaaladda Garoowe Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada ayaa qabsoomi waayay kadib markii goobta lagu qabanayo uu khilaaf ka yimid.
Waxaa diiday Shirka in lagu qabto Garoowe Deni iyo Axmed Madoobe oo ku baaqay in Muqdisho la isagu yimaado, taasoo Farmaajo uu isna ka biyo diiday, maadaama hadii uu ka dhaco Xalane ay ka qeybgalayaan Musharixiinta Mucaaradka oo iska ilaalinayo.
Waxaa kaloo jiray shir gogol-xaar u ah kulanka madaxda oo isna lagu waday inuu Baydhabo ka dhaco, laakiin baaqday, waxaana muuqata inay aad u kala fogaadaan Saamileyda siyaasadeed ee dalka, oo ay adag tahay inay iyagu dhexdooda xalistaan khilaafka doorashadda.
Beesha Caalamka oo mudooyinkii dambe kaalintooda ka gaabisay ayaa suurtagal ah inay si ka duwan sidii hore usoo farageliyaan arrimaha ismariwaaga ka taagan oo ay dhinacyada u qabtaan shirweyn dhamaan Bulshada Rayidka iyo Musharixiinta ka qeybgalayaan, si loo dhiso dowlad loo dhan yahay.
Farmaajo ayaa mudo-xileedkiisa dhamaaday Feb 8 iyadoo aan jirin doorasho iyo Madaxweyne cusub oo xilka kala wareega, waxuuna dalka galay firaaqa dastuuri ah iyo mid awoodeed, taassoo ka dhalan karta fowdo.
Musharixiinta ayaa shalay ku baaqay banaanbax Maalinta Jimcaha ah, waxaana Villa Somalia u diyaarisay Ciidamo gaar ah oo kahor taga hadii la isku dayo inay Musharixiinta dhigaan dibadbax ka dhan ah Farmaajo inuu xukunka sii haysto si sharci darro ah.